သင့်အိုင်ကျူ Option ကိုအသိပညာအခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်အကြံဉာဏ်
February 12, 2019, 2:27 pm / iq-options73839.thezenweb.com
။ သင်ဟာအမြဲအကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့ချင်ခဲ့တယ်, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်အိုင်ကျူ Option ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသင့်ရဲ့လက်ရှိအသိပညာမြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်ကူညီသတင်းအချက်အလက်များအတွက်အင်တာနက်ကိုပှကြပြီ။ ကျနော်တို့အကြံပြုအဖြစ်နောက်တော်သို့လိုက်သည့်အခါဤဆောင်းပါးကိုအတွက်ပေးအဆိုပါအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်, သင်ပြီးသားအဘယ်သို့ပြုသည်ကိုပေါ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်သို့မဟုတ်သင်ကောင်းစွာပယ် start ကိုကူညီဖြစ်စေသင်ကူညီသင့်တယ်
အိုင်ကျူ Option ကိုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကသေးငယ်တဲ့အထဲကစတင်မှသာသင့်ရဲ့ဝင်ငွေရရှိမှုသင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပိုမိုပေါင်းထည့်ရန်ကုန်သွယ်မှတဆင့်ရရှိခဲ့သုံးစွဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ သင် get-go ကနေမှာသိပ်ပိုက်ဆံပစ်လျှင်, သင်ဆိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးကိုသင်တို့ငွေကိုဆုံးရှုံးများ၏အန္တရာယ်ကို run ။ ဒါဟာသင်အချို့မဟုတ်အကောင့်တစ်ခုအပေါ်ငွေကြေးပိုမိုအန္တာရာယ်မှပညာမရှိ။
အိုင်ကျူ Option ကိုအတွက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါ, အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအစဉ်အမြဲအမြတ်အစွန်းထက် ပို. အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သတိပြုမဟုတ်လျှင်သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုအကောင့်ကိုထုတ်ရှင်းလင်းဖို့တစ်ခုတည်းကပ်ဘေးဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုကြာသာ။ ကိုသတိရပါ, သင်အလွန်အကျွံဆုံးရှုံးလျှင်, သင်အလုံအလောက်မြို့တော်သင့်ရဲ့အိုင်ကျူ Option ကိုကုန်သွယ်ဆက်လက်ထွက်ခွာမရှိကြပါဘူး။
အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းပေါ်တွင်သင်၏မဟာဗျူဟာ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသေချာပေါက်သင်ကွန်ပျူတာ-အလိုအလျောက်လိုအပ်ပါတယ်မဆိုလိုပါ။ သင်ကတူညီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသင်ပေးထားသောအခွအေနနှင့်အတူတင်ပြကြသည်အခါတိုင်းအောင်မှကျူးလွန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုပပျောက်ကူညီခြင်းနှင့်ရေရှည်အစီအစဉ်ကိုကပ်နိုင်ပါ။
အဆိုပါအိုင်ကျူ Option ကိုစျေးကွက်နာရီဝန်းကျင်ပြေးနဲ့အမြဲဖွင့်နေစဉ်, သငျသညျအိုင်ကျူ Option ကိုအပေါ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စဉ်သတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ကြောင့်အချိန်ကိုက်အတွက်မဟာဗျူဟာများရှိပါသည်။ အိုင်ကျူ Option ကိုနာရီနားလည်ခြင်းအမြတ်အနိုင်ရဘို့အမြင့်မားသောအလားအလာရှိတဲ့အခါသင်ကုန်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်မဟာဗျူဟာများတိုးမြှင့်ကူညီပေးပါမည်။
သင်သည်သင်၏ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်ဖို့ငွေရှာဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင် အဆိုပါအိုင်ကျူ Option ကိုစျေးကွက်နာရီဝန်းကျင်ပြေးနဲ့အမြဲဖွင့်နေစဉ်, သငျသညျအိုင်ကျူ Option ကိုအပေါ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စဉ်သတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ကြောင့်အချိန်ကိုက်အတွက်မဟာဗျူဟာများရှိပါသည်။ အိုင်ကျူ Option ကိုနာရီနားလည်ခြင်းအမြတ်အနိုင်ရဘို့အမြင့်မားသောအလားအလာရှိတဲ့အခါသင်ကုန်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်မဟာဗျူဟာများတိုးမြှင့်ကူညီပေးပါမည်။
စိတျထဲမှာထားရန်တစ်ခုမှာအရေးကြီးသောအိုင်ကျူ Option ကိုတကယ်တော့တိုင်းငွေကြေးတစ်စုံ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့အပြုအမူရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းကုန်သည်တိုင်းစျေးကွက်မှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ခြုံငုံမဟာဗျူဟာရှိပါတယ်နေစဉ်, ပညာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံတန်းတူအဖြစ်တိုင်း pair တစုံကိုဆကျဆံဖို့မသတိထားကြလိမ့်မည်။ အဆိုပါကုန်သည်တို့သည် pair တစုံရဲ့အထူး idiosyncrasies နှင့်အတူအဆင်ပြေသည်အထိအသစ်တစ်ခု pair တစုံအတွက်ကုန်သွယ်ရေးသတိထားထွက် start သငျ့သညျ။
သင်ညာဘက်ရဲ့အကောင့်တစ်ခုအထုပ်ကို ဒီအထဲကမကြိုးစားအဘယ်ကြောင့် select ကြောင်းသေချာပါစေ။ သငျသညျကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာ၏သင့်အဆင့်ပေါ်တွင်မူတည်သည်များအတွက်အထုပ်အကောင့်ရာသိပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရုံထွက်စတင်နေတယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်အများကြီးနိမ့်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်, သင်တစ်ဦး mini ကိုအကောင့်နဲ့သွားချင်ပါလိမ့်မယ်။
လုံးဝသီးခြားသင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ကုန်သွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သင်ယူပါ။ ဒါကအများကြီးလွယ်ကူသည်ပြုမိထက်ကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်စိတ်ခံစားမှုများစွာကိုတစ်ဦးရဲ့ margin ခေါ်ဆိုမှုအပြစ်တင်ဖို့ရှိပါတယ်။ "သူဌေးကသူစျေးကွက်ပြသ" ကိုထိနျးခြုပျ - တစ်ဦးအဆင့်ကိုဦးခေါင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာစီစဉ်ထားအရောင်းကုန်သွယ်အမြတ်အစွန်းဖို့နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သငျသညျစိုးရိမ်စိတ်, စိတ်လှုပ်ရှားမှု, အမျက်ဒေါသ, သို့မဟုတ်အခြားစိတ်ခံစားမှုသင့်ရဲ့ယုတ္တိအတွေးများကိုလွှဲပြောင်းယူနေပါတယ်, ကဝေးလမ်းလျှောက်ဖို့အချိန်, ဒါမှမဟုတ်သင်တစ်ဦးရဲ့ margin ခေါ်ဆိုမှုအတွက်ဖြစ်အံ့သောငှါခံစားရလျှင်။
။ မျှော်လင့်, ဤအကြံပြုချက်များအချို့အလွန်တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်သင်ပြီးသားပေါ်မှာရှိခဲ့ကြပေမည်အကြံအစည်နှင့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးစုစည်းဖို့တစ်လမ်းပေးပြီ ငွေကြေးကိုကုန်သွယ်။ သငျသညျကုန်သွယ် start သည့်အခါစိတ်တွင်ဤအကြံပြုချက်များ Keeping သငျသညျတစျနေ့ကိုတစ်ဦးအလွန်အမြတ်အစွန်းကုန်သည်ဖြစ်လာကူညီပေးနိုင်ပါသည် ဤနေရာတွင်ပေးအပ်အကြံပေးချက်သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တစ်ဦးခိုင်က start ရန်သင့်အားချွတ်ရသင့်တယ် ဤနေရာတွင်ပေးအပ်အကြံပေးချက်သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တစ်ဦးခိုင်က start ရန်သင့်အားချွတ်ရသင့်တယ်
Comments on “သင့်အိုင်ကျူ Option ကိုအသိပညာအခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်အကြံဉာဏ်”